အွန်လိုင်းကုန်စည်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဝန်ဆောင်မှု 24X7X365 ရက်
ဘန်ဂလိုသို့ မွမ်ဘိုင်းသို့ ဒေသခံ ထုပ်ပိုးသူများနှင့် ရွှေ့ပြောင်းသူများ
မွမ်ဘိုင်းသို့ ချန်နိုင်းသို့ အကောင်းဆုံး ထုပ်ပိုးသူများနှင့် ရွှေ့ပြောင်းသူများ
ရုံးနေရာပြောင်းရွှေ့ခြင်းဝန်ဆောင်မှုများဖြင့် အိမ်ပြောင်းခြင်းအတွက် ဒေသတွင်း ထုပ်ပိုးသူများနှင့် မွမ်ဘိုင်းမှ Hyderabad သို့ 24x7x365 ရက် ရွှေ့ပြောင်းနိုင်သည်
IBA သည် ဒေသတွင်း အကောင်းဆုံး Packers & Movers များကို Pune သို့ Mumbai သို့ ခွင့်ပြုခဲ့သည်။
အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် ရရှိနိုင်သော မော်တော်ယာဉ် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ဝန်ဆောင်မှုများ၏ အမျိုးအစားများကား အဘယ်နည်း၊ ၎င်းတို့၏ အကျိုးကျေးဇူးများကို ဖော်ပြပါ။
ထုပ်ပိုးထားသော ကုမ္ပဏီများသည် အိမ်ထုတ်ကုန်များကို တစ်နေရာမှ တစ်နေရာသို့ ရွှေ့ပြောင်းလိုသူများအတွက် အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။ ဒီကုမ္ပဏီတွေကလည်း...
ပရော်ဖက်ရှင်နယ် Packers များနှင့် Movers များသည် ရုံးတွင်းနေရာပြောင်းရွှေ့ခြင်းကို မည်သို့ကူညီပေးသနည်း။
လူများကို ထုပ်ပိုးထားသော ရွှေ့ပြောင်းခြင်းဝန်ဆောင်မှုများကို ကူညီပေးသည့်ကုမ္ပဏီများတွင် Chennai၊ Bangalore၊ Kolkata နှင့် Mumbai ကဲ့သို့သော ပြည်နယ်နှင့်မြို့ကြီးများတွင် ကုမ္ပဏီများရှိသည်။ တခြား...
တတ်နိုင်သော အိမ်သုံးပစ္စည်းများနှင့် ရွှေ့ပြောင်းပေးသည့်ဝန်ဆောင်မှုများ၏ အရေးပါမှုကို ကျွန်ုပ်တို့အားလုံး သိပါသည်။ မြို့ပြင်က အလုပ်သမား အများစုဟာ ပစ္စည်းတွေ ရွှေ့ပြောင်းဖို့ လိုအပ်တာ တော်တော် စံပြုလောက်ပါတယ်..။
ဤ ၂၁ ရာစုတွင် ကျွန်ုပ်တို့အများစုသည် မတူညီသောပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍများတွင် အလုပ်ခန့်ကြသည်။ ထိုသို့သော အလုပ်များသည် အနီးနားရှိ မြို့တစ်မြို့မှ တစ်နေရာသို့ ရွှေ့ပြောင်းရန် လိုအပ်သည် ။
မော်တော်ယာဉ် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ဝန်ဆောင်မှုများသည် နိုင်ငံတစ်ဝှမ်း တစ်နေရာမှ တစ်နေရာသို့ ကုန်ပစ္စည်းများ လွှဲပြောင်းပေးပို့ရာတွင် အရေးကြီးပါသည်။ အငှားယာဉ်ဝန်ဆောင်မှုများသည် အရေးပါသော...
123...731 ၏စာမျက်နှာ 73
အနီးနားရှိ ကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေး ဝန်ဆောင်မှုများ216
ကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး လုပ်ငန်း72
Instagram ကိုအပေါ်ကျွန်တော်တို့ကိုလိုက်နာပါ @heavyhaulagetrucks
ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးအပေါ် အထူးအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသော စီးပွားရေးနှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းသည် အဘယ်နည်း။
အထူးသဖြင့် အပြန်အလှန် ပတ်၀န်းကျင်တွင် တွေ့မြင်ရသော စီးပွားရေး၊ သတင်းစာများ၊ ပုံမှန်ဈေးကွက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်-
စားနပ်ရိက္ခာ စီမံဆောင်ရွက်ပေးသော စက်မှုလုပ်ငန်းများ
Packers Movers ကုမ္ပဏီများ
ပျမ်းမျှအားဖြင့် ကမ္ဘာပေါ်တွင် လုပ်ငန်းသုံးယာဉ် အမျိုးအစား မည်မျှရှိနိုင်သနည်း။
ကမ္ဘာပေါ်တွင်တွေ့မြင်ရသော လုပ်ငန်းသုံးကုန်တင်ကားအများစုမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
မီနီထရပ် (Tempo MCV)
ICV Truck အလယ်အလတ် လုပ်ငန်းသုံးယာဉ်
LPT ထရပ်ကားများ (Long Platform Trucks)
HMV Truck (အကြီးစား မော်တော်ယာဉ်)
Dumper Trucks များ
ကွန်ကရစ်ရောစပ်စက် Bulker Truck
India ဆိုတာ ဘာလဲ ?
အိန္ဒိယသည် Devbhoomi ၏ပြည်နှင့်ဘုန်းကြီးသောဘုရင် Bharat ဖြစ်သည်။ ရိုးရှင်းလွယ်ကူသော၊ တိုးတက်အောင်မြင်ပြီး လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း 1000 အတွင်း နိုင်ငံခြားကျူးကျော်သူများသည် လှည့်စားမှုများဖြင့် ယဉ်ကျေးမှုကို ဖောက်ဖျက်ကာ ကျွန်ုပ်တို့၏စံပြယဉ်ကျေးမှုကို အားနည်းသည်ဟု ပြောခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အပေါ် ညစ်ညမ်းသောကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကို တွန်းအားပေးခဲ့ကြသည်။ ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဟိန္ဒီကို မသိသလို အူရဒူးကိုလည်း အင်္ဂလိပ်လို မပြောတတ်ပါ။
အိန္ဒိယစာတိုက်မှ ဖန်တီးထားသော ပို့စ်ကုဒ်သည် သင်၏တည်နေရာ ပင်နံပါတ်နှင့် စာတိုက်ကုဒ်ကို စစ်ဆေးပါ-https://www.indiapost.gov.in/VAS/Pages/findpincode.aspx
183 + အိန္ဒိယရှိမြစ်များ Ref by :- www.pincodeindia.net/list-of-rivers-in-india.php
၇၁၈ ခရိုင် အိန္ဒိယ။
အိန္ဒိယမှာ ဘယ်ပြည်နယ်က အကြီးဆုံးလဲ။
Rajasthan (၃၄၂,၂၃၉ စတုရန်းကီလိုမီတာ) ဧရိယာအားဖြင့် အိန္ဒိယတွင် အကြီးဆုံးပြည်နယ်ဖြစ်သည်။
Pan India ဆိုတာဘာလဲ။
PAN India ? အခြေခံအားဖြင့် Presence Across Nation ကိုဆိုလိုသည်။ ၎င်းသည် အိန္ဒိယနှင့် သက်ဆိုင်သော သို့မဟုတ် ပျံ့နှံ့နေသည့်အရာအားလုံးနီးပါးပါဝင်သည့် အသုံးအနှုန်းဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ကုမ္ပဏီများ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့် နိုင်ငံ၏ မည်သည့်ကိစ္စမဆို ဖြစ်နိုင်သည်။
စုစုပေါင်း ထရပ်ကား ဘယ်နှစ်စီး ရှိပါသလဲ။
ငါတို့မှာရှိတယ် ကုန်တင်ကား ၁၅ စီး မှချိတ်ဆက်ထားသည်။ ခရိုင် ၂ ခု မြို့ပြ၊ ကျေးလက်၊ မက်ထရိုနှင့် အခက်ခဲဆုံးသော ဝေးလံခေါင်သီသောနေရာများမှ ဝန်ကို ဝန် သို့မဟုတ် ပြန်ပေးသည်။ ၎င်းအပြင် ၎င်းတို့အား တာယာများ၊ ဘက်ထရီများ၊ အပိုပစ္စည်းများနှင့် အာမခံမူဝါဒများကို အရောင်းကိုယ်စားလှယ်များနှုန်းဖြင့် ပေးဆောင်ပါသည်။ ၎င်းလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံး၏ အမြတ်၏ 40% သည် ငွေကြေး သို့မဟုတ် ကျန်းမာရေးအရင်းအမြစ်များအတွက် မတော်တဆ ထရပ်ကားယာဉ်မောင်းများ၏ မိသားစုများအတွက် အနည်းငယ် ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ ဒါမှ သူသေလုမြောပါးဘဝက အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ရဲ့ ရှေ့တော်မှာ အဆုံးမသတ်နိုင်ပါဘူး။
အိန္ဒိယမှာ ထရပ်ကား ဘယ်နှစ်စီးလဲ။
သတင်းရင်းမြစ်များမှတဆင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် ပျမ်းမျှလုပ်ငန်းသုံး ထရပ်ကားများ သိန်း 80 ခန့် အလုပ်ခန့်ထားကြောင်း သတင်းအချက်အလက် ရရှိခဲ့ပါသည်။ အဲဒီအထဲက 20% ကနေ့စဉ်အလုပ်လုပ်ပါတယ်။
ကျန်ရှိနေသေးသော ကုန်တင်ကားများ၏ 30% loading သို့မဟုတ် unloading ကုမ္ပဏီများတွင် ၎င်းတို့၏နံပါတ်ကို ပေါ်လာစေရန် အချိန်အကြာကြီးစောင့်ပါ။
On 15% လမ်းများပေါ်တွင် ဗျူရိုကရေစီက ဝင်တိုက်သော ကုန်တင်ကားများသည် အကျင့်ပျက်ခြစားမှုကို ခြိမ်းခြောက်ရန် အဝေးပြေးလမ်းများပေါ်တွင် ရပ်နေပါသည်။
ကုန်တင်ကားများ၏ 10% ဘရိတ်ချခြင်း သို့မဟုတ် ယာဉ်မောင်းမရှိခြင်းကြောင့် ရပ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။
ကျန်တာတွေ ကုန်တင်ကားများ၏ ၂၅ ရာခိုင်နှုန်း အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏ မြို့ငယ်များ၊ ခရိုင်များ သို့မဟုတ် လက်လှမ်းမမီသော ဝေးလံခေါင်သီသော နေရာများတွင် ပြန်လာမည့်ဝန်ကို စောင့်ဆိုင်းနေကြသည်။
အခွအေနေ ထရပ်ကားမောင်းသူ ကုန်စည်ပို့ဆောင်ခ ကောင်းကောင်းမရတာကြောင့် အရမ်းဆိုးပါတယ်။
Passive Transport ဆိုတာ ဘာလဲ။
Passive သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး စွမ်းအင်ထည့်သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။ ဥပမာတစ်ခု passive သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ပျံ့နှံ့ခြင်း၊ အာရုံစူးစိုက်မှု မြင့်မားသော ဧရိယာမှ မော်လီကျူးများ၏ ရွေ့လျားမှု. သယ်ဆောင်သူပရိုတိန်းများနှင့် ချန်နယ်ပရိုတင်းများသည် ပျံ့နှံ့မှုကို လွယ်ကူချောမွေ့စေပါသည်။
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့် ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးကုန်ကျစရိတ်သည် ကုမ္ပဏီအားလုံးတွင် အဘယ်ကြောင့်ကွာခြားသနည်း။
ကျဉ်းမြောင်းသောစိတ်ထားကြောင့် အောက်ပါဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကို မကြာခဏတွေ့မြင်နေရသောကြောင့် ယင်းအတွက် လေးနက်သောအကြောင်းရင်းများစွာရှိပါသည်။
ကုန်တင်ယာဉ်လုပ်ငန်းတွင် ကီလိုမီတာနှုန်းထားများကို အစိုးရက မသတ်မှတ်ထားပေ။
စက်မှုဇုန် သို့မဟုတ် မန်ဒစ်များ နေရာတိုင်းတွင် မျှော်မှန်းထားသည့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု မရှိသေးပါ။
အရင်းရှင်စနစ်ကြောင့် လူအနည်းစု၏ လွှမ်းမိုးချုပ်ကိုင်မှုကို နိုင်လိုမင်းထက် လက်ဝါးကြီးအုပ်လုပ်ကိုင်နေသော ဤလုပ်ငန်းကို တည်ဆောက်ခဲ့သည်။
ဤဆားဒ်များ၊ ဘာဘာများ၊ နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်များနှင့် နိုင်ငံခြားသားများသည် အရင်းရှင်စနစ်မြှင့်တင်ရန်နှင့် စီးပွားရေးကို သိမ်းပိုက်ရန်အတွက် ငွေမည်းများကို အသုံးပြုကြသည်။ အမြတ်အစွန်းအတွက် ကြမ်းတမ်းသော လမ်းကြောင်းများကို အသုံးပြုပါ။ ဒီသတင်းတွေကို သတင်းစာတွေမှာ တွေ့ရတယ်။
စည်းလုံးညီညွတ်မှု မရှိခြင်းကြောင့် ဗျူရိုကရေစီ တိုးမြင့်လာကာ ယာဉ်မောင်းများ၏ ဘဝသည် သနားစရာကောင်းလာသည်။ 18 နာရီမှ 20 နာရီကြာအလုပ်လုပ်ပြီးနောက်တောင်မှယာဉ်မောင်းအတန်းသည်၎င်းတို့၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းမပေးနိုင်ပါ။
မော်တော်ယဉ်ဈေးနှုန်းများနှင့် အရင်းအမြစ်များသည် နေ့စဉ်နှင့်အမျှ ဈေးတက်လာသော်လည်း လွန်ခဲ့သည့်ဆယ်စုနှစ်များကတည်းက လက်မှတ်ခများ မတိုးလာဘဲ ကုန်ကျစရိတ် ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော် မြင့်တက်လာခဲ့သည်။
Transporter သည် ကုန်ကျစရိတ်တိုင်းတွင် အခွန် 18% မှ 28% ပေးဆောင်သော်လည်း တက္ကစီပြန်အမ်းခြင်း အကျိုးခံစားခွင့်ကို မရရှိပါ။
Return load သည် တစ်ချိန်လုံး ပြဿနာရှိနေပါသည်။ Tier2Tier3city မှ ပြန်လာမည့်ဝန်အား5ရက်မှ 10 ရက်စောင့်ရပါမည်။ ဝန်အား အခြားနေရာများမှ မရနိုင်ပါ။
မလုံခြုံသောပတ်ဝန်းကျင်၊ စီးပွားရေးအကျပ်အတည်း၊ အကျင့်ပျက်ခြစားမှုနှင့် ပြည်သူများ၏ အကျင့်ပျက်ခြစားမှုများကြောင့် ယာဉ်မောင်းသည် မူးယစ်မူးယစ်ခြင်းများကို ချုပ်ကိုင်ထားပြီး ယာဉ်မတော်တဆမှုများ တိုးများလာနေပါသည်။
ကုန်စည်ပို့ဆောင်ခ လုံခြုံရေးနှင့် လိမ်ညာမှု အပြည့်အဝ နုတ်ယူခြင်း။
အစိုးရနှင့် အစိုးရမူဝါဒများသည် ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ငန်းကို မလုပ်ဆောင်နိုင်ပါ။
အထက်ဖော်ပြပါအားလုံးသည် သင်၏ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစရိတ်စကအပေါ် သက်ရောက်မှုရှိမည်ဖြစ်သည်။
မှတ်ချက် - လွန်ခဲ့သောဆယ်စုနှစ်များက သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစရိတ်သည် သင့်ထုတ်ကုန်၏ 5% ဖြစ်သည်။ လက်ရှိတွင် 8% မှ 30% အထိတိုးလာ
Transport v/s Logistics မှာ ဘာတွေကွာခြားလဲ။
လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကအစ ကုန်စည်များ တိုက်ရိုက် ရွေ့လျားခြင်း။ ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးသည် ကုန်ပစ္စည်းအတွင်းနှင့်ပြည်ပသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစီမံခန့်ခွဲမှု ထုတ်လုပ်သူမှ အဆုံးထိ သုံးစွဲသူအထိ….
အိန္ဒိယမှာ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းကို ဘယ်လိုစလုပ်မလဲ။
အိန္ဒိယရှိ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးယာဉ်များ၏ 99% သည် ပထဝီဝင်နှင့် စီးပွားရေးအရ ဖိသိပ်ထားသည်။ အတူတူစီးပွားရေးလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ရူပီး သိန်း 20 ကနေ သိန်း 50 နဲ့စပေးမှာပါ ၅နှစ်အတွင်း အရှုံးနဲ့ပိတ်တယ်။. ဒါပေမယ့် ရှေ့တိုးပြီး စံပြစီးပွားရေးအတွက်၊ မင်း အရင်းအနှီး ၁၀ သိန်းကျော်လိုတယ်။ကျွမ်းကျင်ဝန်ထမ်းများ၊ အဆင့်မြင့်နည်းပညာများ၊ ပြီးပြည့်စုံသော ပထဝီဝင်ဆိုင်ရာ အသိပညာဖြင့် ဆယ်စုနှစ်2ခုအတွေ့အကြုံရှိရန် အရေးကြီးပါသည်။
အိန္ဒိယတွင် စျေးအသက်သာဆုံး သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်က ဘယ်နည်း။
ရေ၊ မြေ၊ လေ၊ ပျမ်းမျှအားဖြင့် ဤကြားခံများအားလုံးကို နိုင်ငံတိုင်းတွင် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက် ရနိုင်သော်လည်း ဦးတည်ရာကို မှတ်သားထားကာ အခြေအနေအရ ဆုံးဖြတ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်အတွက် စျေးသက်သက်သာသာနှင့် အကျိုးရှိနိုင်စေမည့် အိန္ဒိယနှင့် အာရှနိုင်ငံများရှိ ပြည်နယ်များတွင် ကုန်းလမ်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဝန်ဆောင်မှု 32 အမျိုးအစားကို ပေးဆောင်ပါသည်။
အိန္ဒိယမှာ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် ဘယ်လိုရနိုင်မလဲ။
အစိုးရက ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ရရှိရေး လွယ်ကူစေရန် များစွာကြိုးပမ်းခဲ့သော်လည်း အေးဂျင့်မပါဘဲ လိုင်စင်ရရန် အလွန်ခက်ခဲသည်။ ၎င်း၏နောက်ဆုံးစျေးနှုန်းကိုလည်းအေးဂျင့်မှဆုံးဖြတ်သည်။ ငွေကြေးအရ လိုအပ်သော ပေါ့လျော့မှုအား ဆောင်ရွက်ပေးပြီး ရလဒ်အနေဖြင့် မှုခင်းနှင့် မတော်တဆမှုများ ဆက်တိုက်ဆိုသလို တိုးပွားလာနေပုံပေါ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ NGO အသစ်မှတဆင့် လိုအပ်သောသူများကို6လသင်တန်း ကောင်းကောင်းဖြင့် အခမဲ့ လိုင်စင်ထုတ်ပေးရန် ကျွန်ုပ်တို့၏ ကြိုးပမ်းချက်ဖြစ်ပါသည်။ သို့မှသာ ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးသော အလုပ်လက်မဲ့များ အလုပ်အကိုင်ရရှိစေပြီး အများသူငှာ အသိုက်အဝန်း ကောင်းမွန်ပြီး ခေတ်မီသော ယာဉ်မောင်းများ ရရှိစေပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် လက်ရှိတွင် ဤပရောဂျက်တစ်ခုလုံးအတွက် ရန်ပုံငွေအဆင့်တွင် ရှိနေပါသည်။
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းတွင် အကြီးမားဆုံး အထင်အမြင်လွဲမှားမှုကား အဘယ်နည်း။
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းတွင် ပထဝီဝင်နှင့် အရည်အချင်းကို လျစ်လျူရှုထားခြင်းကြောင့် ယာဉ်ပိုင်ရှင်များသည် အကြွေးအလွန်အကျွံ တာဝန်ခံမှု၊ တာဝန်ယူမှုနှင့် ကုန်ကျစရိတ်များ လွန်ကဲပြီးသည့်တိုင် စျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့် လုပ်ကိုင်နေကြသည်ဟု ယုံကြည်ရသည်။
ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေး 919408275245 +
ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များထံ မေးခွန်း 33 ခုမေးပြီး ၎င်းတို့၏လိုအပ်ချက်၊ ဘတ်ဂျက်အချိုးနှင့် ဝန်ပေါ်မူတည်၍2သို့မဟုတ်3ကိုပေးပါသည်။ အလုပ်အော်ဒါမှာယူပြီးမှသာ တင်ဆောင်ရန်အတွက် ထရပ်ကားအား ပေးပို့ပြီး အတည်ပြုပြီးသော ကမ်းလှမ်းချက်အတိုင်း 20% ကြိုတင်ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။ တင်ပြီးပါက စာရွက်စာတမ်းအားလုံးကို ဖြည့်စွက်ပါ။ လက်ကျန်ငွေ 80% ကိုယူပါ။ ပြီးတော့ သူ့ရဲ့လုပ်ငန်းတိုးတက်မှုအကြောင်း ဖောက်သည်ကို နေ့စဉ် အသိပေးပါ။ ဦးတည်ရာသို့ လွှင့်တင်ပြီးနောက်၊ ၎င်းတို့၏ အနာဂတ်တိုးတက်မှုများအတွက် နှစ်ဖက်စလုံးမှ တုံ့ပြန်ချက်များကို ရယူသည်။
အိန္ဒိယစီးပွားရေးမြှင့်တင်ရေးတွင် လက်ရှိအစိုးရက ပံ့ပိုးကူညီနေပါသလား။
နယ်ပယ်အသီးသီးမှ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များက အစိုးရအနေဖြင့် သီးခြားကဏ္ဍများတွင် ပိုမိုအသုံးစရိတ်များ တိုးမြှင့်လုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်ကြောင်း အဓိကအားဖြင့် ပြောကြားကြသည်။ လက်ရှိအစိုးရအနေဖြင့် ပညာရေး၊ အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု၊ ချိတ်ဆက်မှုနှင့် အခြားအရာများစသည့် အချက်များစွာကို အာရုံစိုက်လုပ်ဆောင်နေပါသည်။ ဒါတွေအားလုံးဟာ ကျဆင်းနေတဲ့ စီးပွားရေးတိုးတက်မှုနဲ့အတူ တိုးတက်မှုကို ပြန်လည်ရှင်သန်စေမယ့် အဓိက ကဏ္ဍတွေပါ။ ရာနှင့်ချီသော လုပ်ငန်းရှင်များအပြင် ကုန်ထုတ်လုပ်မှု ကဏ္ဍများတွင်လည်း လုပ်ငန်းရှင်များသည် စီးပွားရေး တိုးတက်ကောင်းမွန်လာခဲ့သည်။ အစိုးရသည် အရှိန်အဟုန်ပြင်းပြင်းဖြင့် စီးပွားရေးကို ပြန်လည်ဦးမော့လာစေရန်အတွက် စီမံချက်အချို့ကို စတင်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ အိန္ဒိယသည် ကုန်ထုတ်လုပ်မှုနှင့် အခြားဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍများအတွက် လိုအပ်ချက်ကို တုံ့ပြန်ပြီးနောက် GDP ၏ 80% တိုးတက်လာသည်။
ဖောက်သည် အပိုင်းက ဘာလဲ။ အိန္ဒိယ ဖောက်သည် အခြေစိုက် လူတန်းစားက ဘယ်လိုလဲ။
Customer segmentation သည် ဖောက်သည်အား အုပ်စုတစ်ခုသို့ ပိုင်းခြားခြင်းအလေ့အကျင့်တစ်ခုမှလွဲ၍ ကျန်တစ်ခုဖြစ်သည်။ မားကတ်တင်းနှင့် ပတ်သက်သည့် အရာအများစုကို လုပ်ဆောင်နေပါသည်။ ထို့ကြောင့်၊ ၎င်းသည် အလုံးစုံအကျိုးစီးပွားများနှင့် သုံးစွဲမှုအလေ့အထများကို ဖြည့်ဆည်းရာတွင် အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်၊ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးလိုအပ်ချက်များနှင့် စုစည်းသတ်မှတ်ထားသော နည်းလမ်းများကို အကဲဖြတ်ရန် ၎င်းကိုခေါ်သည်။
သန်းပေါင်းများစွာသော အိန္ဒိယလူဦးရေသည် အခြေခံလူတန်းစား၏ အကြီးမားဆုံးအကွာအဝေးရှိသည်။ အိန္ဒိယဈေးကွက်အကွာအဝေးကြောင့်လည်း မြင့်မားသည်ဟု ယူဆပါသည်။ ၎င်းတွင် လူလတ်တန်းစား၊ အချမ်းသာဆုံးနှင့် ပျမ်းမျှအောက် အခြေခံလူတန်းစားများ ပါဝင်သည်။ ၎င်းတွင် ကြွယ်ဝသောတန်ဖိုးရှိပြီး တစ်ခါတစ်ရံ အလွန်ညံ့ဖျင်းသောအခြေအနေတွင် ပါဝင်ပါသည်။ ဒေတာဘေ့စ်ကိုစစ်ဆေးခြင်းတွင် အိန္ဒိယအခြေစိုက် အတန်းကြီးကိုလည်း ပြသသည်။
ပထဝီဝင် ကွဲပြားမှုများကြောင့် အိန္ဒိယရှိ နိုင်ငံပေါင်းစုံ စီးပွားရေးကုမ္ပဏီများအတွက် အခက်အခဲဖြစ်စေသည် ။
လူမျိုးရေး၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ လူမျိုးရေး၊ ကျား၊မ နှင့် အခြားသော အထောက်အထား အမျိုးအစားများသည် ကမ္ဘာကြီးကို လူတို့ သိ၊ မြင်ပုံနှင့် တွေ့ကြုံပုံကို ဆုံးဖြတ်ပေးသည်။ မတူကွဲပြားသော ပတ်ဝန်းကျင်မှ လူများသည် တွေးခေါ်၊ တုံ့ပြန်ကြပြီး ကွဲပြားစွာ သင်ယူကြသည်။ အိန္ဒိယရှိ နိုင်ငံပေါင်းစုံရှိ စီးပွားရေးကုမ္ပဏီများသည် ၎င်းတို့၏ဝန်ထမ်းများကို နားလည်ရန်ကြိုးစားနေချိန်တွင် ခက်ခဲသည်။ ထူးခြားချက်မှာ ပထဝီဝင် ကွဲပြားမှုသည် အဖွဲ့အစည်းအတွင်း စည်းလုံးညီညွတ်မှု အားနည်းခြင်းသို့ ဦးတည်သွားမည်ဖြစ်သည်။ မှန်ကန်စွာ အသုံးချပါက၊ ပထဝီဝင် ကွဲပြားမှုသည် နိုင်ငံပေါင်းစုံ စီးပွားရေးကုမ္ပဏီများအတွင်း ထက်မြက်မှုနှင့် ဉာဏ်ပညာအတွက် ဘက်စုံနှင့် ဘက်ပေါင်းစုံ အမြင်ကို ပေးစွမ်းနိုင်သည်။ အိန္ဒိယရှိ ကုမ္ပဏီများသည် ပထဝီဝင်အနေအထားအရ ပေးဆောင်ရမည့် နိုင်ငံပေါင်းစုံ ကုန်သွယ်မှုအတွက် ပြဿနာများ မရှိတော့ပါ။ ဖြစ်စဉ်က နည်းနည်းရိုးရှင်းတာကြောင့်ပါ။
အိန္ဒိယတွင် မျှော်မှန်းထားသည့်အတိုင်း ထိရောက်သော ကုန်စည်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးယာဉ် ရရှိနိုင်ပါသလား။
အိန္ဒိယတွင် အသွင်ကူးပြောင်းရေးသည် လက်ရှိအစိုးရ၏ လျှပ်စစ်နှင့် ရွေ့လျားသွားလာမှုအပေါ် ကြီးမားသော တွန်းအားပေးမှုနှင့်အတူ ပိုမိုလက်တွေ့ဖြစ်လာသည်။ အစိုးရ၏ တွေးခေါ်ပညာရှင် – NITI Aayog သည် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏ သုညထုတ်လွှတ်မှုမုဒ်ကို တိုးမြှင့်ရန်အတွက် အသွင်ကူးပြောင်းရေးကို ဦးဆောင်လျက်ရှိသည်။ Multi-Axle Trucks (MATs) ကို India တွင် ရရှိနိုင်သော ထိရောက်သော ကုန်စည်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးယာဉ်အဖြစ် သတ်မှတ်ကြပြီး စက်မှုသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတွင် တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုကြသည်။ ဤကားများသည် အဓိကအားဖြင့် ၂၆.၂ တန်မှ ၄၉ တန်အထိ အလေးချိန်ရှိသော ကားများဖြစ်သည်။ အဆိုပါကားများ၏ရောင်းအား 26.2% မြင့်မားအဖြစ် 49 နှင့် 2009 အကြားခုန်တက်သွားခဲ့သည်။ ကုန်စည်လုပ်ငန်းသုံးယာဉ်များကို အမြင့်ဆုံးစံချိန်စံညွှန်းအဆင့်တွင် အကြီးအကျယ် မြှင့်တင်ခဲ့ပြီး စုစုပေါင်းလုပ်ငန်းသုံးယာဉ်စျေးကွက်၏ 2010% မှာ အကြီးအကျယ် တိုးတက်ခဲ့သည်။
အိန္ဒိယတွင် ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး သို့မဟုတ် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစရိတ်များ ကွဲပြားမှုမှာ အဘယ်နည်း။
အိန္ဒိယသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကဏ္ဍသည် အလွန်ကြီးမားပြီး ကွဲပြားသည်။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအတွက် အဓိကဖြေရှင်းချက်တစ်ရပ်ကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။ ကုန်စည်နှင့် ကုန်ပစ္စည်းများ ရွှေ့ပြောင်းခြင်းအတွက် ကုန်းလမ်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသည် အလွန်လိုအပ်ပြီး ကောင်းမွန်သော လုပ်ဆောင်ချက်များ ပါဝင်ပါသည်။ ရလဒ်များစွာရရှိပြီး သွင်းကုန်အများစုသည် လမ်းကြမ်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအပေါ် မှီခိုနေရပါသည်။ ထို့အပြင် အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစရိတ်များသည် တတ်နိုင်သည့်အပြင် လုပ်ငန်းအရွယ်အစားပေါ်မူတည်ပါသည်။ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလိုအပ်ချက်အတွက် ပျမ်းမျှလူဦးရေကို အချိန်ပေးသည့် ထုတ်ဝေမှုမှ လုပ်ဆောင်သည်။ ထို့ကြောင့် ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးနှင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး စရိတ်စကများ ကွဲပြားမှုအပေါ် အခြေခံ၍ စီးပွားရေး ကဏ္ဍများတွင် ကန့်သတ်ထားသည်။
လေးလံသော သယ်ယူပို့ ဆောင်မှု ကြီးကြီးမားမား ကြီးမားသော ODC သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသည် အိန္ဒိယတွင် ရိုးရှင်းသော အလုပ်တစ်ခု ဖြစ်သည် ။
ODC၊ တစ်နည်းအားဖြင့် over-dimensional cargo ဟုခေါ်သော over-dimensional cargo သည် အရွယ်အစားကြီးသော ကုန်စည်များကို ရွှေ့ပြောင်းရန်အတွက် ယာဉ်များ၏ ကုန်းပတ်အပြင်ဘက်တွင် လုံးလုံးထည့်ထားသည်။ ကုန်တင်၏ အလျားနှင့် အမြင့် နှစ်ခုစလုံးသည် ပုံမှန်ယာဉ်များထက် ပိုကြီးသည်။ အဆိုပါ လေးလံသော ကုန်တင်ကုန်ချများကို ပြည်တွင်းနှင့် စီးပွားရေး ကဏ္ဍများတွင် အသုံးပြုသည်။ အိန္ဒိယရှိ ODC သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသည် လူများကို ၎င်းတို့၏ လေးလံသောကုန်ပစ္စည်းများကို တစ်နေရာမှ နောက်တစ်ခုသို့ လျင်မြန်စွာပြောင်းရန် ကူညီပေးနိုင်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အဆိုပါယာဉ်များသည် ခေတ်မီစက်ကိရိယာများစွာဖြင့် ကောင်းစွာတပ်ဆင်ထားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည် လေးလံသော ကုန်စည်များကို ခရီးဝေးမှ သယ်ယူနိုင်စွမ်းရှိသည်။ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဝန်ဆောင်မှုပေးသူသည် ဤကဏ္ဍတွင် လုံလောက်သော အတွေ့အကြုံရှိသောကြောင့် အဖွဲ့သည် အလုံးစုံသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကို အရှုပ်အရှင်းကင်းစေသည်။
ကမ္ဘာပေါ်တွင် ကုန်ပစ္စည်းသယ်ယူ ပို့ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းသုံး မော်တော်ယာဉ် ထရပ်ကား ထုတ်လုပ်သူ မည်မျှ ကျော်ကြားသနည်း။
နာမည်များစွာဖြင့် လုပ်ငန်းသုံးကားများကို ထုတ်လုပ်သည့် ဒေသ သို့မဟုတ် ဒေသဆိုင်ရာ ထုတ်လုပ်သူ သို့မဟုတ် တပ်ဆင်ယူနစ်များစွာ ရှိပါသည်။ သို့သော် ကျွန်ုပ်တို့သည် လူကြိုက်အများဆုံး အဆင့်မြင့်၊ ထိရောက်ပြီး အရည်အသွေးမြင့် လေးလံသော ထရပ်ကား ထုတ်လုပ်သူများစာရင်းကို သင့်အား မျှဝေပါမည်။
Volkswagen Group က
အိန္ဒိယမှာရှိတယ် 29 ပြည်နယ်များ။ ရှိပါတယ် ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ ၇ .သို့သော် ရိုးရှင်းမှုနှင့် အောင်မြင်မှု၏ ရှုထောင့်မှကြည့်လျှင် ၎င်းတို့ကို အောက်ပါ ဒေသအလိုက် ကြည့်ရှုပါသည်။
တောင်ပိုင်းအိန္ဒိယ :- Andhra Pradesh ,Karnataka , ကီရာလာ ,တမီးလ်နာဒူး ,Telangana , Pondicherry (သို့မဟုတ် Puducherry)၊
အနောက်ပိုင်းအိန္ဒိယ :- မဟာရပ်ရှ , Goa ,ဂူ , Dadra နှင့်နဂါးပါပြီ , Daman & Diu ,Rajasthan
အရှေ့အိန္ဒိယ (အိန္ဒိယနိုင်ငံ အရှေ့မြောက်ပိုင်း):- Arunachal Pradesh ပြည်နယ် , အာသံ , Meghalaya , မဏိပူရ , မီဇိုရမ်ပြည်နယ် , ဆစ်ကင်း , Tripura , နာဂ
မြောက်အိန္ဒိယ :- Bihar , Chhattisgarh , Haryana , Chandigarh , Himachal Pradesh ပြည်နယ် , ဂျေဟာခန်းပြည်နယ်မှာ , Madhya Pradesh
Odisha , ပန်ဂျပ် , Uttar Pradesh ပြည်နယ် , Uttarakhand , အနောက်ဘင်္ဂလား, ဒေလီ , Jammu & Kashmir , Ladakh.
အိုက်စလန် :- Andaman & Nicobar , Lakshadweep
အိန္ဒိယမှာ ဘာသာစကား ဘယ်နှစ်ဘာသာလဲ။
အိန္ဒိယတွင် ကျွန်ုပ်တို့တွင် လူတို့၏မိခင်ဘာသာစကားဖြစ်သော ဘာသာစကား 1600+ ကျော်ရှိသည်။ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံရဲ့ ဒေသအသီးသီးမှာ မတူညီတဲ့ ဘာသာစကားကို အဲဒီဒေသကလူတွေ ပြောကြတယ်။
အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် တံတားကြီးပေါင်း ၂၀၀ ကျော်ရှိသော်လည်း အကျင့်ပျက်ခြစားမှုနှုန်းကြောင့် အခြေအနေမကောင်းပေ။
အိန္ဒိယတွင် 6,64,369 ရွာ။
အိန္ဒိယမှာ ပြည်နယ်နဲ့ ပြည်ထောင်စု နယ်မြေ ဘယ်လောက်ရှိလဲ။
အိန္ဒိယမှာရှိတယ် 29 ပြည်နယ်များ။ ရှိပါတယ် ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ ၇.
အိန္ဒိယရဲ့ GDP ကဘာလဲ။
ဂျီဒီပီ 2020-21 တွင် လက်ရှိပေါက်ဈေးမှာ ရူပီး 197.46 သိန်း ခန့်မှန်းထားပြီး 203.51-2019 တွင် ပထမပြင်ဆင်ထားသော ရူပီး 20 သိန်းနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ကျဆင်းလာကြောင်း ပြသနေသည်။ -3.0% ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ်နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ၇ ဒသမ ၈ ရာခိုင်နှုန်း တိုးတက်ခဲ့ကြောင်း ဝန်ကြီးဌာနမှ သိရသည်။
UTC/GMT +5:30 နာရီ
အိန္ဒိယတွင် ဆန်းသစ်တီထွင်မှုကို နေ့စဉ်နှင့်အမျှ လက်ခံကျင့်သုံးနေသော ထရပ်ကားထုတ်လုပ်သူ အများအပြားရှိသည်။ သို့သော် အဝေးပြေးလမ်းများ စစ်တမ်းအရ သိရသည်။
TATA Trucks - ပြန်လည်ရောင်းချခြင်း၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် ဆီစားသက်သာခြင်းအတွက် အကောင်းဆုံး
Ashok Leyland :- Hill Side Movement အတွက် အကောင်းဆုံး။
Eicher :- အလွန်ဆီစားသက်သာခြင်း၊ အထူးကောင်းမွန်သော ဖောက်ထွင်းစနစ်၊ သက်တောင့်သက်သာရှိပြီး ချောမွေ့စွာမောင်းနှင်ခြင်း။
Mahindra Trucks :- Mining အပိုင်းတွင် လူကြိုက်များသည်။
Bharat Benz :- လေးလံသော ခရီးအသွားအလာ အလွန်အကျွံ Load
ISUZU :- LCV Segment သည် ပြည်တွင်းစီးပွားရေးအတွက် သာမန်လူလေးများအတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
ကုန်တင်ကား အမျိုးအစားအားလုံးနှင့် ကုန်တင်ယာဉ် မှတ်တမ်း :- ကျေးဇူးပြု၍ နှိပ်ပါ
My Knowledge မှာဆိုရင် မတူညီတဲ့ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနည်းလမ်းတွေနဲ့ နည်းလမ်းတွေရှိပါတယ်။ လေ၊ ရေ၊ မြေသယ်ရထားလမ်းများ သို့မဟုတ် မီးရထားများ၊ လာမည့်မုဒ်များ ပါဝင်သည်။ ကြိုးနှင့် ဒရုန်းစနစ်များ
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေးဟူသည် အဘယ်နည်း။
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသည် စီးပွားရေးလုပ်ဆောင်မှုတွင် မရှိမဖြစ်အခန်းကဏ္ဍတစ်ခုဖြစ်သည်။ အရင်းအမြစ်များနှင့် စျေးကွက်များသို့ လက်လှမ်းမီမှုမရှိဘဲ၊ စီးပွားရေးတိုးတက်မှုနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး မဖြစ်နိုင်ပါ။ ထို့ကြောင့် ထိရောက်သော သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်သည် ရေရှည်တည်တံ့သော စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို ဖော်ဆောင်ရာတွင် အခြေခံကျသော အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးနှင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ပျမ်းမျှကုန်ကျစရိတ်က ဘယ်လောက်လဲ။
အထွေထွေကုန်စည်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး တစ်ကီလိုမီတာလျှင် 15 ရူပီးနှုန်း
Oversize Load ကုန်စည်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး တစ်ကီလိုမီတာလျှင် 25 ရူပီး + ခွင့်ပြုချက်အားလုံး ကုန်ကျစရိတ်
အိန္ဒိယတွင် ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက် သယ်ယူပို့ ဆောင်မှုကို မည်သူက စတင်လုပ်ဆောင်ခဲ့သနည်း။
International Transport Forum (ITF) နှင့် National Institute for Transforming India (NITI Aayog) တို့သည် အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် Decarbonising Transport in Emerging Economies (DTEE) ပရောဂျက်ကို ပူးတွဲလုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။
အိန္ဒိယမှာ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တွေကို ဘယ်လို သယ်ပို့မလဲ။
အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်သည် အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ဖြစ်သည်။ အများသူငှာနှင့် ကုန်စည်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ဝန်ဆောင်မှု မကောင်းသည့် အိန္ဒိယနိုင်ငံကဲ့သို့ ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများတွင် အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ကိရိယာကို ရှာဖွေရန် ခက်ခဲသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်အား ထိရောက်မှုရှိသောအမြင်ဖြင့် အကောင်းဆုံးရောင်းချသူကိုရှာဖွေရန် ကျွန်ုပ်တို့ကူညီပေးပါသည်။
အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလိုင်စင်ကို မည်သို့ရယူရမည်နည်း။
အသေးစား သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းစတင်ခြင်းလုပ်ငန်းကို MSME ပေါ်တယ်မှ မှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့် GST ပေါ်တယ်မှ စာရင်းသွင်းနံပါတ်ကို ပို့ဆောင်သူအသစ်အတွက် တစ်ပတ်အတွင်း အခမဲ့ရရှိနိုင်ပါသည်။ မတတ်နိုင်ရင်၊ GRAHAK SUVIDHA KENDRA Rs.500 ကုန်ကျပါမည်။ ပျမ်းမျှအားဖြင့် သင့်လုပ်ငန်းသည် ငွေကျပ် သိန်း 20 အထိ ပြီးမည်ဖြစ်သည်။ ဒီစာရွက်ပြီးရင် သင့်ဝင်ငွေနဲ့ လုပ်ငန်းက ကုန်ကျစရိတ်တွေ တိုးလာမယ်။ လိုအပ်ပါက ဒေသဆိုင်ရာ သို့မဟုတ် ဒေသဆိုင်ရာ မှတ်ပုံတင်ခြင်း ပြုလုပ်ရမည်။
လူ သို့မဟုတ် ကုန်ပစ္စည်းများ လွှဲပြောင်းရာတွင် ဖြစ်ပေါ်လာသော လုပ်ငန်းစဉ်ကို သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဟု ခေါ်သည်။ နေရာရွှေ့ပြောင်းခြင်း သို့မဟုတ် သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ နည်းလမ်းများစွာဖြင့် ပျမ်းမျှအားဖြင့် အကျိုးကျေးဇူးရှိသည်။ အဓိကအားဖြင့် ရေပန်းစားသော လုပ်ငန်းသုံးမျိုးမှာ ရေ၊ လေကြောင်း သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ ကုန်းလမ်း သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတို့ဖြစ်သည်။ ရထားလမ်းများ၊ ကြိုးလမ်းများ၊ မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်များကဲ့သို့ အလယ်အလတ်အသစ်များသည်လည်း လုပ်ဆောင်နေပြီး ဖွံ့ဖြိုးဆဲဖြစ်သည်။
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး အမျိုးအစား ဘယ်လောက်ရှိလဲ။
အဓိကအားဖြင့် ၎င်း၏ လူကြိုက်များသော လုပ်ငန်းခွင်သုံး ကြားခံများဖြစ်သည်။ ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး၊ လေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး၊ ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေး။လက်ရှိအချိန်မှာ, ရထားလမ်းများ၊ ကြိုးလမ်းများ၊ ဒရုန်းများကဲ့သို့ ကြားခံအသစ်များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအောက်တွင်လည်း လုပ်ဆောင်လျက်ရှိပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် လေးလံသော ခရီးလမ်း သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ဝန်ဆောင်မှု ၃၂ မျိုးကို လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။
အိန္ဒိယ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးက ဘယ်သူလဲ။
ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေး ဝန်ကြီးဌာန အဝေးပြေး ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ပို့ဆောင်ရေး
“ပို့ဆောင်ရေး Bhawan” 1၊ Sansad Marg၊ New Delhi – 110001
တယ်လီဖုန်း- +91 11-23711252, 23710121
လက်တွေ့တွင် ကုမ္ပဏီ သို့မဟုတ် လုပ်ငန်းတစ်ခု၏ အဓိပ္ပာယ်နှင့် အသုံးပြုမှုသည် အဘယ်နည်း။
အမှန်တကယ်တော့ ကုမ္ပဏီ သို့မဟုတ် စက်မှုလုပ်ငန်းသည် အထူးသဖြင့် လုပ်ငန်းကို ချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်သည့် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကုမ္ပဏီကို နည်းလမ်းများစွာဖြင့် ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်နိုင်သည်။ ကုမ္ပဏီတစ်ခုသည် ကော်ပိုရေးရှင်း၊ တစ်ဦးတည်းပိုင် သို့မဟုတ် အစုစပ်လုပ်ငန်းအောက်တွင် ဖြစ်နိုင်သည်။ သင်လုပ်ကိုင်နေသော မတူညီသောကုမ္ပဏီကို အခြေခံ၍ ၎င်းကို လူတစ်ဦးတည်း သို့မဟုတ် တစ်ဦးချင်းအုပ်စုတစ်စုကပင် ပိုင်ဆိုင်နိုင်သည်။ ကုမ္ပဏီသည် အခြေအနေများစွာတွင် ကောင်းမွန်စွာ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်နိုင်သည်။ တာဝန်ဝတ္တရားသည် အထူးအရေးပါသော ကုမ္ပဏီအမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်သည်။ အိန္ဒိယနိုင်ငံရှိ ကုမ္ပဏီ သို့မဟုတ် စက်မှုလုပ်ငန်းသည် နိုင်ငံတစ်ဝှမ်း ခေတ်မီနည်းပညာနှင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဆိုင်ရာ အထောက်အကူပြုပစ္စည်းများ တိုးတက်မှုနှင့်အတူ ကြီးမားသောတိုးတက်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
စက်မှုလုပ်ငန်း သို့မဟုတ် စက်မှုထွန်းကားရေးအပေါ် လူထုစိတ်ဝင်စားမှု မည်သို့အကျိုးသက်ရောက်သနည်း။
စက်မှုထွန်းကားမှုသည် လူ့အဖွဲ့အစည်းအပေါ် ကြီးမားသော သက်ရောက်မှုရှိပြီး နိုင်ငံတွင်း အပြောင်းအလဲအချို့ကို ပြည်သူတို့က စောင့်မျှော်ရမည်ဖြစ်သည်။ စက်မှုလုပ်ငန်းအပေါ် လူထုစိတ်ဝင်စားမှုအပေါ် အခြေခံ၍ အမြတ်အစွန်းနှင့် အလုပ်အကိုင်များ ပိုမိုမြင့်မားလာသည်။ မြို့ပြအသွင်ကူးပြောင်းမှုတွင် တိုးပွားလာကာ လူများသည် ရှာဖွေဖွံဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် မြို့ပြဗဟိုသို့ ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ကြသည်။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ အချို့သော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသည် လူ့အဖွဲ့အစည်း၏ အကူအညီဆီသို့ ဦးတည်နေပါသည်။ စက်မှုတော်လှန်ရေးတွင်လည်း စီးပွါးရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာခဲ့သည်။ စက်မှုထွန်းကားရေးအပေါ် လူထုစိတ်ဝင်စားမှုကြားတွင် သိသာထင်ရှားသော လူမှုရေးပြောင်းလဲမှုများကို ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည်။ တော်လှန်ရေးသည် စက်မှုလုပ်ငန်းဘက်ခြမ်းတွင် ကုန်းလမ်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတွင် သိသာထင်ရှားသော အပြောင်းအလဲများကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် ပေါ်ပေါက်လာသည်။ အလုပ်သမားများသည် အခကြေးငွေရရှိကြပြီး ကုန်ပစ္စည်းအမြောက်အမြားထုတ်လုပ်ရာတွင် အခွင့်ကောင်းယူကြသည်။
Logistic ဆိုတာ ဘာလဲ၊ ဘာအလုပ်လုပ်လဲ?
ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးသည် စက်ကိရိယာများ၊ ထုတ်ကုန်များ၊ ပစ္စည်းများ၊ နှင့် စာရင်းအင်းများ အပါအဝင် အရင်းအမြစ်များကို တစ်နေရာမှ နောက်တစ်ခုသို့ ရွေ့လျားစေသည့် လုပ်ငန်းစဉ်ကို ရည်ညွှန်းရန် ကျယ်ပြန့်စွာ အသုံးပြုပါသည်။ ဤအသုံးအနှုန်းကို အသုံးချပရိုဂရမ်များစွာတွင် အသုံးပြုသည်။ ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး ဝန်ဆောင်မှု အမျိုးမျိုးကို ရရှိနိုင်သော်လည်း လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးသည် စီးပွားရေး ကျွမ်းကျင်သူများကြားတွင် ပိုမိုကျော်ကြားလာပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် လုပ်ငန်းထုတ်ကုန်များ သို့မဟုတ် ပစ္စည်းသည် ဖောက်သည်များထံ မရောက်ရှိပါက ပျက်ကွက်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးသည် အရေးကြီးသော အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်လာသောအခါ မှန်ကန်သောနေရာဖြစ်သည်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏ အခြားကဏ္ဍများစွာကိုလည်း သက်ရောက်မှုရှိသည်။ ထုတ်ကုန်များကို သင့်ဖောက်သည်များထံ အချိန်မီ ပို့ဆောင်ပါက ကုမ္ပဏီတစ်ခု၏ အမြတ်အစွန်းကို တိုးမြင့်စေမည်ဖြစ်သည်။
အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး အမျိုးအစားမည်မျှ ပိုမိုအသုံးပြုလာသနည်း။
အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် လျင်မြန်စွာ မြို့ပြအသွင်ကူးပြောင်းမှုနှင့်အတူ နိုင်ငံ၏စီးပွားရေး တိုးတက်မှုသည်လည်း တိုးတက်လာခဲ့သည်။ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်အား အဓိကအားဖြင့် ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေး၊ မီးရထား၊ ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး၊ လေဆိပ်နှင့် လေကြောင်းလိုင်းများ၊ ကမ်းရိုးတန်းပို့ဆောင်ရေးနှင့် အခြားအခြားသော ကွဲပြားသည့်ပုံစံများအဖြစ် မြှင့်တင်ခဲ့သည်။ လမ်းမကြီးများသည် နိုင်ငံတွင်း သွားလာမှု စုစုပေါင်း၏ ၈၅ ရာခိုင်နှုန်းခန့်ကို သယ်ဆောင်သည့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏ အဓိက နည်းလမ်းဖြစ်သည်။ အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် မှတ်ပုံတင်ထားသော မော်တော်ယာဉ် ၁၉၁.၇ သန်းခန့်ရှိပြီး အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် မှတ်ပုံတင်ထားသော မော်တော်ယာဉ်စုစုပေါင်းမှ 85% သို့ တိုးမြှင့်လိုက်ပါသည်။ လမ်းများပေါ်တွင် မော်တော်ယာဉ် အရေအတွက် တိုးမြင့်လာသည်နှင့်အမျှ စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန် လမ်းခင်းပေးသည်။
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းရဲ့ အားနည်းချက်တွေက ဘာတွေလဲ။
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး လုပ်ငန်း၏ အားနည်းချက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်။
အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် မကြာခဏ ယာဉ်မတော်တဆမှုများ ဖြစ်ပွားပါက ကုန်းလမ်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသည် အန္တရာယ်များသည်။ ယာဉ်မတော်တဆမှုများအတွက် လိုအပ်သော လုံခြုံရေးအစီအမံများ မပြုလုပ်ခဲ့ပါ။
လမ်းမလုံလောက်သော အိန္ဒိယနိုင်ငံရှိ လမ်းအများအပြားမှာ မလုံလောက်ဘဲ ဆိုးရွားသည့်ပုံစံဖြင့်လည်း ရနိုင်ပါသည်။ ဧရိယာ 34 sq.km တိုင်းတွင် အရှည် ၃၄ ကီလိုမီတာသာ လမ်းများရှိသည်။
ကြီးလေးသောအခွန်များ ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေး လုပ်ငန်း၏ နောက်ထပ်အားနည်းချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒီနိုင်ငံမှာ ကားတစ်စီးအတွက် အခွန်ဝန်ဆောင်ခက Rs. ၃၅၀၀။
အိန္ဒိယနိုင်ငံရှိ လမ်းများကို ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု ညံ့ဖျင်းသော လမ်းများကို ကောင်းမွန်စွာ မထိန်းသိမ်းနိုင်ပါ။ အိန္ဒိယတွင် လမ်းပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုတွင် နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ၀င်ငွေ၏ 0.1% သာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားသည်။
ဒီဇယ်နှင့် ဓာတ်ဆီ ကုန်ကျစရိတ် မြင့်တက်လာခြင်း ကုန်းလမ်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှု ပမာဏသည် အဆက်မပြတ် မြင့်တက်လာနေသည်။
ကြီးမားသောကုန်စည်များအတွက် မသင့်လျော်ပါ ၎င်းသည် လေးလံသောကုန်စည်များအတွက် မသင့်လျော်ပါ။
အိန္ဒိယမှာ အဓိက စီးပွားရေးပြဿနာတွေက ဘာတွေလဲ။
ရှေးပဝေသဏီကတည်းက အိန္ဒိယလူမျိုးများသည် ငြိမ်းချမ်းရေးကို မြှင့်တင်ခဲ့ကြသည်။ လုပ်ငန်းသည် အထွတ်အထိပ်သို့ သိသိသာသာ တိုးတက်သွားသော်လည်း လုပ်ငန်းအများစု ကြုံတွေ့နေရသည့် ပြဿနာအချို့လည်း ရှိနေသည်။ အစိုးရနှင့်သက်ဆိုင်သည်၊ 'နတ်ဘုရားများ' ၏ရာဇ၀တ်မှုများ၊ လမ်းများအခြေအနေ၊ အကျင့်ပျက်ခြစားမှုသို့မဟုတ်အခြားမည်သည့်အခြေအနေတွင်ဖြစ်စေစီးပွားရေးသည်အချို့သောအခြေအနေများတွင်ထိခိုက်နိုင်သည်။ အကျင့်ပျက်ခြစားမှုသည် အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ပျံ့နှံ့နေသည့် အဆိုးရွားဆုံးရောဂါဖြစ်သောကြောင့် ပညာရှိစွာနှင့် လျင်မြန်စွာ ကိုင်တွယ်ရန် အရေးကြီးပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့နိုင်ငံသည် လက်ရှိအချိန်တွင် အပြောင်းအလဲများစွာ လိုအပ်နေသော်လည်း ဆောလျင်စွာ ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန် ကျွန်ုပ်တို့ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့် အရေးကြီးသည့်အချက်အချို့မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
ညံ့ဖျင်းသော သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဝန်ဆောင်မှု၏ ဆိုးရွားသောစီးပွားရေးအပေါ် မည်မျှအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသနည်း။
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ဝန်ဆောင်မှု ညံ့ဖျင်းမှုကြောင့် လုပ်ငန်းအများအပြား ထိခိုက်ခဲ့သည်။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ညံ့ဖျင်းခြင်းကြောင့် စားသုံးရန်နေရာ ရွှေ့ပြောင်းခြင်း ၊ ၎င်းတွင် မှတ်သားထားရမည့်အချက်များစွာပါဝင်ပြီး ထုတ်လုပ်ရေးတွင် အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။ ဤအခြေအနေကို ထိန်းချုပ်ရန်အတွက် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ညံ့ဖျင်းမှုကို တတ်နိုင်သမျှ မြန်မြန်ကျော်လွှားရန် လိုအပ်သည်။ ကျေးလက်ဒေသများတွင် လမ်းများ လုံလောက်စွာ တိုးလာခြင်းသည် ကုန်ထုတ်လုပ်မှု တိုးလာတတ်သည်။ စိုက်ပျိုးရေးသွင်းအားစုနှင့် ဈေးကွက်အတွက် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးသည် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါသည်။ ဒါကြောင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ညံ့ဖျင်းတာကို မှန်ကန်တဲ့ တိုင်းတာမှုတွေ ပြုလုပ်ပြီး ဖြေရှင်းရပါမယ်။ အထူးသဖြင့် ကျေးလက်ဒေသများတွင် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ချောမွေ့စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် အရေးကြီးပါသည်။ ဒါကြောင့် အစိုးရအနေနဲ့ ဒီအယူအဆလွဲမှားမှုကို ရှောင်ရှားဖို့နဲ့ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး မြှင့်တင်ရေးအတွက် အကောင်းဆုံး လုပ်ဆောင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အိန္ဒိယအစိုးရမူဝါဒက စီးပွားရေးလုပ်ဖို့ အသင့်တော်ဆုံးလား။
မကြာသေးမီက၊ Narendra Modi ဦးဆောင်သော အိန္ဒိယအစိုးရသည် အဆုံးမရှိသော ထွန်းသစ်စ လုပ်ငန်းများစွာ၏ ကျယ်ပြန့်သော ကမ္ဘာကို ပိုမိုအာရုံစိုက်နေသည်။ ဒီလိုအောင်မြင်ဖို့အတွက် အိန္ဒိယအစိုးရဟာ အခွင့်အလမ်းသစ်တွေနဲ့ အစီအစဉ်တွေကို ဖန်တီးနေပါတယ်။ ၎င်းတို့သည် ကုမ္ပဏီများကို ပြုစုပျိုးထောင်ရေးနှင့် ဆန်းသစ်တီထွင်မှု နှစ်ခုစလုံးတွင် ကူညီပေးသည်။ စွန့်ဦးတီထွင်မှုအသစ်များကို ပံ့ပိုးပေးရန်အတွက် အိန္ဒိယအစိုးရမှ အစပျိုးလုပ်ဆောင်မှုများစွာရှိသည်။ အိန္ဒိယလူငယ်များကြားတွင် တီထွင်ဖန်တီးနိုင်မှု ယဉ်ကျေးမှုကို မြှင့်တင်ရန်လည်း ရည်ရွယ်ပါသည်။ ထူးခြားပြီး ကြီးမားသော ကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များဖြင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံသည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကို တစ်ဦးချင်းမြှင့်တင်နိုင်ပြီး တိုးတက်ကောင်းမွန်ကာ နိုင်ငံနှင့်ကမ္ဘာ့အကျိုးအတွက် အလုပ်အကိုင်များကို ပြုလုပ်နိုင်သည်။ တိုင်းပြည်ကြီးပွားတိုးတက်ရေး အတွက် ခြေလှမ်းတိုင်းကို လျှောက်လှမ်းနေပါသည်။
သယ်ယူပို့ ဆောင်ရေး Nagar
matrix Calculator ကို
အိန္ဒိယ၏ 1st Heavy Haulage Trucks Aggregator
Project Consultant သည် Heavy Hauling ဖြစ်သည်။
ပစ္စည်းကိုင်တွယ် ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးနှင့် သိုလှောင်ရုံ
ဝဘ် :- www.roadstransporter.com
ဖောက်သည်ပံ့ပိုးမှု :- +919408275245
အိန္ဒိယစံတော်ချိန်- နံနက် ၈ နာရီမှ ည ၈ နာရီအထိ
စီးပွားရေးပွင့်လင်းမြင်သာမှု၊ ဖော်ရွေသော ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများနှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှု၊ လွန်ကဲထိရောက်မှု၊ သင့်လျော်သောလမ်းညွှန်မှုနှင့် အမြင့်ဆုံးနိဂုံးချုပ်ချက်မှာ ABCC INDIA Project Cargo Corporation ၏ အဓိပ္ပါယ်ဖြစ်သည်။ အိန္ဒိယ၊ နီပေါ၊ ဘူတန်၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် 686 ခရိုင် 6,49,481 သည် စဉ်ဆက်မပြတ်၊ ရိုးရှင်းသော၊ ရနိုင်၊ တတ်နိုင်သော၊ ယုံကြည်စိတ်ချရသော၊ ထင်ပေါ်ကျော်ကြားသော၊ ထိထိရောက်ရောက်သယ်ဆောင်သွားသော စီးပွားရေးဝန်ဆောင်မှုများ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ်နှင့် ဂုဏ်သိက္ခာရှိသော နေရာအားလုံးကို နိုင်ငံတိုင်းတွင် နေရာပေးပါသည်။ စီးပွားရေးသမား၏ အကျိုးစီးပွားနှင့်စပ်လျဉ်း၍ နယ်ပယ်အသီးသီးရှိ လူတိုင်းအား စဉ်ဆက်မပြတ်၊ ဘက်မလိုက်၊ ရိုးရှင်း၊ လွယ်ကူပြီး ယုံကြည်စိတ်ချရသော ဝန်ဆောင်မှုများပေးခြင်းဖြင့် လုပ်ငန်း၏ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုနှင့် ရိုးရှင်းမှုကို တိုးမြှင့်ရန် ကြိုးပမ်းအားထုတ်လျှက်ရှိပါသည်။ ပြည်နယ်တစ်ခုစီကို အကောင်းဆုံးစံနှုန်းများနှင့် အခြေခံမူများ၏ အခြေခံအုတ်မြစ်များနှင့် ချိတ်ဆက်ခြင်းဖြင့် အကောင်းဆုံး နိဂုံးချုပ်ချက်များဖြင့် နိုင်ငံတော်၏ စီးပွားရေးရှုထောင့်နှင့် ဂုဏ်သိက္ခာတို့သည် တိုးတက်မှုလမ်းကြောင်းပေါ်တွင် ဆက်လက်တည်ရှိနေပါသည်။ ဖွံ့ ဖြိုးဆဲနိုင်ငံ မဟုတ်ဘဲ ဖွံ့ ဖြိုးဆဲနိုင်ငံ ဟူသော အမည်ကို မရနိုင်ပေ။ ဖောက်သည်များ၏ ပံ့ပိုးကူညီမှုနှင့် ယုံကြည်မှုသည် ကုမ္ပဏီများ၏ ရလဒ်ကောင်းများ ထုတ်ပေးနိုင်စွမ်းထက် ပိုအရေးကြီးသည်၊ ဖောက်သည်၏ ယုံကြည်မှုနှင့် စိတ်ကျေနပ်မှုသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ အဖွဲ့အစည်း၏ အကြီးမားဆုံး အောင်မြင်မှုဖြစ်သည်။